နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ (ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အပတ်စဉ် တရားရုံးကြားနာမှုတွေနဲ့ အမှုအလားအလာတွေကို အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ အခုတော့ တရားရုံးကြားနာမှု လေးပတ်မြောက်အခြေအနေကို ကိုရန်နိုင် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ် စွဲထားတဲ့ အမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်က သီးသန့်တရားရုံးမှာ ဒီတပတ် ၄ ပတ်မြောက်အဖြစ်နဲ့ ဆက်ပြီးတော့ ကြားနာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်က သူ့အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုတွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ မမှန်ကန်တာ၊ သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံတာအပြင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ မညီတာတွေကို ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီတပတ် အမှုတွေကို ကြားနာစစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အပေါ်စွဲထားတဲ့ အမှုတွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ မလျော်ကန်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ရှေ့နေတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီအမှုတွေဟာ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုမညီတာပါလဲ? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတဦးဖြစ်တဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မညီဘူးဆိုတာ ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းက ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အကယ်၍ စွပ်စွဲခံရသူတယောက်ကို ပထမကတည်းက တိုင်ချက်ဖွင့်လိုက်ရမယ်။ ဘာကြောင့် တိုင်ချက်ဖွင့်သလဲဆိုရင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် တိုင်ချက်ဖွင့်ရမယ်။ တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့မှ ဖမ်းရမှာပေါ့နော်၊ အဲဒီလိုမျိုးသွားရမယ်။ အခုဟာက အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဒီပြစ်မှုတွေ ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ သူတို့ ၁ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက အရေးပေါ်ကာလ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတော့မှ အဲဒီ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီမှာ ဖမ်းလိုက်တာပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ၊ တယ်လီဖုန်းတွေ၊ စကားပြောစက်တွေ တွေ့ပြီးတော့မှ တိုင်ချက်တွေဖွင့်တယ်။ အစက အမှုမရှိဘူး။ ယခင်ကလည်း ဘာမှအမှုမရှိဘူး။ ဖမ်းပြီးခါမှ နောက်မှ အမှုတွေ စွဲတဲ့အခါကျတော့ ဒါက ရဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရဆိုရင် ဒါက နောက်မှ အမှုစွဲတာပေါ့။ ဥပမာလေးတခုက တောင်ကိုရီးယားမှာ ဆိုလို့ရှိရင် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ပါ့ခ်ဂွမ်ဟေး၊ သူဆိုလို့ရှိရင် သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က လာဘ်စားမှုနဲ့ တိုင်ချက်ဖွင့်တာ။ ပေါ်လွင်တော့မှ အရေးယူတာ။ ဒါတွေက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကျတာပေါ့။”
စစ်တပ်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက်လင်းအားကြီးအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ရဲ့ နေအိမ်တွေကို ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ကနေ ဆက်သွယ်ရေး စကားပြောစက်တွေကို သိမ်းဆည်းရမိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၈၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ-၆၇ တွေနဲ့လည်း အမှုဖွင့် တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို တရားစွဲခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့တရားခွင်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဆွဲထားတဲ့ မြေပုံနဲ့ ခုခံချေပတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
“မြေပုံဆွဲထားတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သူ့ဘာသာသူ ဆွဲထားတာ။ ကျနော်က မြေပုံကြည့်ပြီးတော့ သူ့ကိုမေးတာ။ မြေပုံဆိုတာက ထုံးစံက အမှုစစ်အရာရှိက မြေပုံဆွဲပေးရမယ်။ ဘယ်မှာပဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှုတမှုဖြစ်သွားရင် မြေပုံဆိုတာ ဆွဲပေးရမယ်။ ဒီအမှုစစ်အရာရှိက အမှုထဲမှာ ဆွဲမထားဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆွဲထားတယ်။ ဆွဲထားတော့ ကျနော်က မြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ မေးတာ။ ဗိုလ်ကြီးကတော့ မြေပုံမြင်သလား မမြင်သလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီသက်သေက သူကလည်း အမှန်အတိုင်းကို အကုန်လုံးပြောသွားတာ။ အဲဒီဗိုလ်ကြီး မင်းထက်အောင်ကိုပဲ ဒီပစ္စည်းတွေက လုံခြုံရေးအရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေပဲကိုင်တာ မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးတော့ ဟုတ်တယ် ပြည်ထဲရေးက ဝန်ထမ်းတွေပဲ ကိုင်တာတဲ့။ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကလည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကလား ဆိုတော့လည်း ဟုတ်တယ် ဒါပဲပြောတာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရင်လူတွေက မေးမရပေမယ့် ဒီဗိုလ်ကြီးကျတဲ့ အခါကျတော့ သူက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြကည်ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းက ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေဘက်ကတော့ ဒီစကားပြောစက်တွေဟာ သူမရဲ့ နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆီက သိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် အဲဒီလုံခြုံရေးတွေဟာလည်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေး ခန့်အပ်ထားသူတွေဖြစ်ပြီး ပြည်ထဲရေးက အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သလို သက်သေကိုလည်း အမှုအတွက် အမှန်အတိုင်း ထွက်ဆိုနိုင်အောင် လုပ်ဆာင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ကတော့ စစ်ကောင်စီဘက်က ပါတီဗဟိုက ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နဲ့ ၁၃ ရက်နေ့တွေက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက် ၂ စောင်ကို သက်သေတင်ပြီး ၅၀၅ (ခ) နဲ့ စွဲထားတဲ့အမှုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့အတွက် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်တာကြောင့် သက်သေမခိုင်မာဘူးလို့ တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ကို ခိုးဝင် ဝင်ရောက်ခဲ့မှုနဲ့ နအဖစစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေက သူမဟာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိသလို အဆိုပါ အမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ လုံခြုံရေး ချထားတဲ့ကြားက အဲဒီလို ဝင်ရောက်ခဲ့တာဟာ လုံခြုံရေးတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ သက်သေအခိုင်အမာနဲ့ လျှောက်လဲခဲ့ကြပေမယ့် အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာ နအဖစစ်အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ တရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှု တရားရုံးကွားနာမှု လေးပတျမွောကျ ခုခံခပြေ
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှုတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ အပတျစဉျ တရားရုံးကွားနာမှုတှနေဲ့ အမှုအလားအလာတှကေို အပတျစဉျ တငျဆကျပေးနရောမှာ အခုတော့ တရားရုံးကွားနာမှု လေးပတျမွောကျအခွအေနကေို ကိုရနျနိုငျ တငျပွပေးထားပါတယျ။
နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့တို့အပျေါ စှဲထားတဲ့ အမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး နပွေညျတျောက သီးသနျ့တရားရုံးမှာ ဒီတပတျ ၄ ပတျမွောကျအဖွဈနဲ့ ဆကျပွီးတော့ ကွားနာစဈဆေးခဲ့ပါတယျ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျတို့ဘကျက သူ့အပျေါ စှဲဆိုထားတဲ့ အမှုတှဟော ဥပဒကွေောငျးအရ မမှနျကနျတာ၊ သကျသအေထောကျအထား မခိုငျလုံတာအပွငျ ဥပဒလေုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ မညီတာတှကေို ဖျောထုတျတငျပွနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီတပတျ အမှုတှကေို ကွားနာစဈဆေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက သူ့အပျေါစှဲထားတဲ့ အမှုတှဟော ဥပဒကွေောငျးအရ မလြျောကနျတဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှေ ဖွဈနတေယျလို့ ရှနေ့တှေကေို ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဆိုတော့ ဒီအမှုတှဟော ဥပဒေ လုပျထုံးလုပျနညျးတှနေဲ့ ဘယျလိုမညီတာပါလဲ? ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့တေဦးဖွဈတဲ့ တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးကွညျဝငျးက အခုလိုပွောပါတယျ။
“လုပျထုံးလုပျနညျး မညီဘူးဆိုတာ ဒီလုပျထုံးလုပျနညျးက ဘယျလိုလဲဆိုတော့ အကယျ၍ စှပျစှဲခံရသူတယောကျကို ပထမကတညျးက တိုငျခကျြဖှငျ့လိုကျရမယျ။ ဘာကွောငျ့ တိုငျခကျြဖှငျ့သလဲဆိုရငျ ပစ်စညျးတှနေဲ့ မိသှားပွီ ဆိုလို့ရှိရငျ တိုငျခကျြဖှငျ့ရမယျ။ တိုငျခကျြဖှငျ့ပွီးတော့မှ ဖမျးရမှာပေါ့နျော၊ အဲဒီလိုမြိုးသှားရမယျ။ အခုဟာက အဲဒီလိုမြိုးမဟုတျဘူး။ ဒီပွဈမှုတှေ ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ သူတို့ ၁ ရကျနမှေ့ာ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီက အရေးပျေါကာလ ပွဋ်ဌာနျးလိုကျပွီးတော့မှ အဲဒီ ၁ ရကျနေ့ မနကျ ၄ နာရီမှာ ဖမျးလိုကျတာပဲ။ ဆကျသှယျရေးပစ်စညျးတှေ၊ တယျလီဖုနျးတှေ၊ စကားပွောစကျတှေ တှပွေီ့းတော့မှ တိုငျခကျြတှဖှေငျ့တယျ။ အစက အမှုမရှိဘူး။ ယခငျကလညျး ဘာမှအမှုမရှိဘူး။ ဖမျးပွီးခါမှ နောကျမှ အမှုတှေ စှဲတဲ့အခါကတြော့ ဒါက ရဲလုပျထုံးလုပျနညျးအရဆိုရငျ ဒါက နောကျမှ အမှုစှဲတာပေါ့။ ဥပမာလေးတခုက တောငျကိုရီးယားမှာ ဆိုလို့ရှိရငျ တောငျကိုရီးယားသမ်မတ ပါ့ချဂှမျဟေး၊ သူဆိုလို့ရှိရငျ သမ်မတတာဝနျ ထမျးဆောငျနရေငျးနဲ့ အစိုးရအဖှဲ့က လာဘျစားမှုနဲ့ တိုငျခကျြဖှငျ့တာ။ ပျေါလှငျတော့မှ အရေးယူတာ။ ဒါတှကေ လုပျထုံးလုပျနညျးကတြာပေါ့။”
စဈတပျက ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ မနကျလငျးအားကွီးအခြိနျမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ သမ်မတဦးဝငျးမွငျ့တို့ရဲ့ နအေိမျတှကေို ဝငျရောကျစီးနငျးပွီး အာဏာသိမျးတဲ့အခြိနျမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ နအေိမျကနေ ဆကျသှယျရေး စကားပွောစကျတှကေို သိမျးဆညျးရမိတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပို့ကုနျသှငျးကုနျဥပဒေ ပုဒျမ-၈၊ ဆကျသှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ-၆၇ တှနေဲ့လညျး အမှုဖှငျ့ တရားစှဲခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို တရားစှဲခဲ့တဲ့အပျေါမှာ ပွီးခဲ့တဲ့တရားခှငျအတှငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ဆှဲထားတဲ့ မွပေုံနဲ့ ခုခံခပြေတာတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။
“မွပေုံဆှဲထားတာက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သူ့ဘာသာသူ ဆှဲထားတာ။ ကနြျောက မွပေုံကွညျ့ပွီးတော့ သူ့ကိုမေးတာ။ မွပေုံဆိုတာက ထုံးစံက အမှုစဈအရာရှိက မွပေုံဆှဲပေးရမယျ။ ဘယျမှာပဲ ဘာပဲဖွဈဖွဈ၊ အမှုတမှုဖွဈသှားရငျ မွပေုံဆိုတာ ဆှဲပေးရမယျ။ ဒီအမှုစဈအရာရှိက အမှုထဲမှာ ဆှဲမထားဘူး။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက ဆှဲထားတယျ။ ဆှဲထားတော့ ကနြျောက မွပေုံကိုကွညျ့ပွီးတော့ မေးတာ။ ဗိုလျကွီးကတော့ မွပေုံမွငျသလား မမွငျသလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီသကျသကေ သူကလညျး အမှနျအတိုငျးကို အကုနျလုံးပွောသှားတာ။ အဲဒီဗိုလျကွီး မငျးထကျအောငျကိုပဲ ဒီပစ်စညျးတှကေ လုံခွုံရေးအရ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက ဝနျထမျးတှပေဲကိုငျတာ မဟုတျဘူးလားလို့ မေးတော့ ဟုတျတယျ ပွညျထဲရေးက ဝနျထမျးတှပေဲ ကိုငျတာတဲ့။ အဲဒီဝနျထမျးတှကေလညျး ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနကလား ဆိုတော့လညျး ဟုတျတယျ ဒါပဲပွောတာပဲ။ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆီက တှတေ့ာမဟုတျဘူးဆိုတာ အရငျလူတှကေ မေးမရပမေယျ့ ဒီဗိုလျကွီးကတြဲ့ အခါကတြော့ သူက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ဖွဈသှားတာပေါ့။” လို့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွကညျရဲ့ ရှနေ့ေ ဦးကွညျဝငျးက ဆိုပါတယျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့တှေဘေကျကတော့ ဒီစကားပွောစကျတှဟော သူမရဲ့ နအေိမျခွံဝငျးအတှငျးမှာရှိတဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှဆေီက သိမျးဆညျးခဲ့တာဖွဈပွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆီက သိမျးဆညျးရမိခဲ့တာ မဟုတျကွောငျး၊ ဒါ့အပွငျ အဲဒီလုံခွုံရေးတှဟောလညျး ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက တာဝနျပေး ခနျ့အပျထားသူတှဖွေဈပွီး ပွညျထဲရေးက အသုံးပွုတဲ့ ပစ်စညျးတှဖွေဈကွောငျး တငျပွခဲ့သလို သကျသကေိုလညျး အမှုအတှကျ အမှနျအတိုငျး ထှကျဆိုနိုငျအောငျ လုပျဆာငျနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါ့အပွငျ ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနကေ့တော့ စဈကောငျစီဘကျက ပါတီဗဟိုက ဖဖေျောဝါရီ ၇ ရကျနဲ့ ၁၃ ရကျနတှေ့ကေ ထုတျပွနျတဲ့ ကွညောခကျြ ၂ စောငျကို သကျသတေငျပွီး ၅၀၅ (ခ) နဲ့ စှဲထားတဲ့အမှုဟာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အပါအဝငျ ပါတီထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျတှဟော ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ခံထားရတဲ့အတှကျ ပွငျပကမ်ဘာနဲ့ အဆကျအသှယျ ပွတျနတေဲ့အခြိနျ ဖွဈတာကွောငျ့ သကျသမေခိုငျမာဘူးလို့ တငျပွခဲ့ကွပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈကြျောကာလကလညျး အမရေိကနျနိုငျငံသား ဂြှနျယကျတော ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ နအေိမျကို ခိုးဝငျ ဝငျရောကျခဲ့မှုနဲ့ နအဖစဈအစိုးရက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို နအေိမျအကယျြခြုပျ ခမြှတျထားတဲ့ ပွဈဒဏျကို ခြိုးဖောကျတယျဆိုပွီး ပွဈဒဏျခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီတုနျးကတော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ရှနေ့တှေကေ သူမဟာ ခမြှတျထားတဲ့ စညျးကမျးသတျမှတျခကျြတှကေို ခြိုးဖောကျခွငျးမရှိသလို အဆိုပါ အမရေိကနျနိုငျငံသားကိုလညျး ဖိတျချေါခဲ့ခွငျး မရှိကွောငျး၊ လုံခွုံရေး ခထြားတဲ့ကွားက အဲဒီလို ဝငျရောကျခဲ့တာဟာ လုံခွုံရေးတှမှော တာဝနျရှိတယျလို့ သကျသအေခိုငျအမာနဲ့ လြှောကျလဲခဲ့ကွပမေယျ့ အငျးစိနျထောငျတှငျးမှာ နအဖစဈအစိုးရဖှဲ့ထားတဲ့ တရားရုံးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ပွဈဒဏျခမြှတျခဲ့ဖူးပါတယျ။